'छिट्टै ट्राफिक सुधारको महशुस हुनेछ'
अन्तर्वार्ता/विचारशनिवार, श्रावण १४, २०७४
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका नवनियुक्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, “ट्राफिक प्रहरी कारबाहीका लागि मात्र हो भन्ने आमबुझाइ परिवर्तन गर्नेछु ।”
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका नवनियुक्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल । तस्वीरः बिक्रम राई
उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापनका चुनौती के के छन् ?
ट्राफिक व्यवस्थापनमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका प्रष्ट छ । तर, भूमिका अनुरुप काम हुन नसकेको महसूस भइरहेको छ । सडकको इन्जिनियरिङ मिलेको छैन । सडक संकेत, संरचना पर्याप्त छैनन् । अव्यवस्थित रुपमा बढिरहेको जनघनत्वले पनि ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावित भइरहेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीका पनि त समस्या होलान् नि ?
छन् नि ! पहिलो त जनशक्तिकै अभाव छ । सडकमा जतततै धूलोधुवाँ छ । नयाँ–नयाँ प्रविधि पनि छैनन् । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरीले काम गरिरहेको छ ।
समस्या समाधानका लागि के के गर्न सकिन्छ ?
तत्काल सडकको मर्मत हुनुपर्दछ । पुराना ट्राफिक लाइटको मर्मतका साथै नयाँ लाइट थप गर्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनको अवस्था जाँचेर मात्र रुट परमिट दिनुपर्छ । लाइसेन्स दिनुपूर्व चालकलाई ट्राफिक ज्ञानको जानकारी छ, छैन हेरिनुपर्छ ।
हालै मात्र गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्ययोजनामा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारबारे गर्नुभएको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
गृहमन्त्रीको निर्देशनलाई मनन गरेको छु । त्यही अनुरुप व्यावसायिकता र इमानदारितालाई केन्द्रमा राखेर काममा खटिएको छु । आपसी समन्वयलाई प्राथमिकता साथ दीर्घकालीन रुपमा नै शहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने योजना बनाइरहेको छु ।
ट्राफिक प्रहरी नागरिकको सुरक्षाका लागि नभई कारबाहीका लागि मात्र हो भन्ने आमबुझाइ छ । यसलाई परिवर्तन गर्नेतिर लाग्नेछु । ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारमा सरकार, प्रहरी संगठन र नागरिक समाजको जुन अपेक्षा छ, त्यसलाई पूरा गर्न दृढ संकल्पित छु । केही समयमै त्यसको महसूस गराउनेछु ।